Maxaad Noo Dooratay | Xiamen Yasin Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd.
1. Soosaar Toos ah oo Tayo Sare leh
Khibrad 34 sano ah ayaa ku takhasusay soo saarida gelatin loogu talagalay isticmaalka dawooyinka waxaana si weyn loogu isticmaalay kaabsulka jilicsan, qolofka kaabsalka adag, kaniiniga iyo micro-kapsule. Iyo in ka badan 10 sano qolof kaabsal madhan iyo khad collagen. Maareynta aragtida fog, tiirarka sayniska ee hal abuurka leh, waxay soo gaba gabeysaa shaqaale wax soo saar xirfad leh, kooxda iibka aaminka ah iyo dadaalka badan, iyo xakamaynta tayada adag.
2.Habinta Xalka Guud iyo Taageerada Farsamada
Taageero farsamo ayaa la heli karaa. Waxaan nahay xirfad soosaar kaabsal jilicsan ama kaabsal adag oo faaruq ah ama orso cirridka ah marka la isticmaalayo gelatinkeenna;
3. Waxsoosaar Sare
Kaabsol dheeri ah ayaa lagu soo saari karaa iyadoo la adeegsanayo isla kgs of gelatin ka ka badan kuwa keena.
4. Kaydinta Abaabulan
Waxaan leenahay karti ku filan oo aan ku keydin karno tirakoob ku filan si aan u gaarno gaarsiinta degdegga ah
5. Khadka Wax Soo Saarka Heerka GMP
Waxaan si adag ugu hogaansameynaa heerka GMP ee khadkeena wax soo saar kaas oo leh aqoon isweydaarsi nadiif ah oo heer 100,000 ah. sidaas awgeed waxay dammaanad ka qaadi kartaa alaabtayada in lagu soo saari karo jawi aad u nadiif ah oo otomaatig ah oo ku xeeran.
Ilaalinta deegaanka ee saaxiibtinimada leh
Ilaalinta bey'adda dhammaanteed waa mas'uuliyadda ninka. Waxaan diyaarinay nidaam dhammaystiran oo ku habboon nidaamka daaweynta bullaacadaha si loo ilaaliyo habka waara iyo jawiga ku habboon.
8. Adeeg Hufan Oo Hufan
Wakiilladayada iibka waxay u heellan yihiin inay adeegga siiyaan macaamiisheenna. Diyaarso amarrada iyo rarida codsiyada macaamiisha waqtigeeda, sida ku cad siyaasadda dhoofinta waddammada kala duwan waxay bixiyaan dukumiintiyo nadiifin caadooyin dhameystiran. Waxaan diyaar u nahay oo awood u leenahay inaan aadno masaafada dheeriga ah si aan uga sarreynno rajada macaamiisheenna.
9. Xalka Maaliyadeed ee Fudud
T / T ama L / C waa wax la aqbali karo, taas oo ah lacag bixinta sidoo kale waa laga wada hadli karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.